Momba anay - Jiangxi Checheng Trading Co., Ltd.
Jiangxi Checheng Trading Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2016, mpanamboatra matihanina mpamokatra fiara sy vokatra fikarakarana fiara izahay, mampiditra ny fampandrosoana sy ny famokarana, ny varotra ary ny varotra.
Rehefa afaka 4 + taona mahery ny fampandrosoana sy ny fanavaozana mitohy, ny vokatray dia naondrana tany Eropa, Amerika, Azia atsimo atsinanana, Afrika, Afovoany Atsinanana, sns.
JIANGXI CHECHENG dia manam-pahaizana manokana amin'ny R&D, famokarana, ary marketing amin'ny milina fanaovana poloney ho an'ny hetsika roa, ny fandefasana fiara rotary ary ny fandefasana milina kely. Izahay dia namolavola tsy miankina ary namokatra milina poloney isan-karazany, toy ny polisin'ny NEW Super Palm Series DA, Best Sell X-Bot series DA polishers, DF series DA poloney, poloney rotary ary poloney mini. Nahazo ny fanamarinana CE sy RoHS ny vokatray.
Amin'ny maha mpanamboatra azy, manana ny orinasanay manokana any Yongkang, Zhejiang izay malaza amin'ny indostrian'ny fananganana milina isika, eto ny R&D sy ny famokarana. Ny Tale Teknika, izay tompon'andraikitra amin'ny Checheng ihany koa, dia manana traikefa 10+ taona amin'ny R&D sy ny famokarana mpamindra fiara. Miaraka amin'ny haitaoany sy ny fahalalany momba ny vokatra sy ny tsena, ny masininay dia noraisin'ireo mpanjifa tsara ary neken'ny tsena atsy ho atsy.
Manana ekipa matihanina sy mpiara-miasa izahay hamaly ny takinao. Ny ekipanay dia misy mpitarika lavitra mahita, ekipa R&D efa za-draharaha sy teknisianina, ekipa mpivarotra mahay, mpiasa mahay ary mpiasa mifehy kalitao.
Afaka mampiseho anao ny vokatra izahay ary hitarika anao amin'ny safidy ny vokatra mifanaraka amin'ny zavatra ilainao.
1. Ho an'ny mpanjifa marika, afaka manome famolavolana milina, R&D, ary fanokafana lasitra izahay, fanohanana matanjaka ara-teknika ary rafitra rafitra serivisy feno.
2. Ho an'ireo mpivarotra ambongadiny, mpivarotra sy mpivarotra miasa irery dia ampy ny fanisana ataonay, ny valiny haingana, ny fandefasana entana, ny fandefasana azy haingana, ny fiarovana aorian'ny varotra, tsy misy ny vola sy ny faneren'ny lisitra.
Checheng azo antoka fa afaka manome serivisy kilasy matihanina sy voalohany araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Famokarana sy fandefasana
Ny tanjonay dia ny hanome ireo vokatra farany sy tolotra tsara indrindra amin'ny vidiny mirary indrindra. Izahay hope hiara-hiasa amin'ny mpanjifa bebe kokoa ho an'ny fampandrosoana sy tombony iraisana. Tongasoa ireo mpividy hifandray aminay!